Volosarika Ambanidia boriborintany faha-2 nampikaikaika ny mponina ny haratsiny, ary ao Antetezana Afovoany boriborintany voalohany mirefy 300m. Mitohy hatrany ny asa manakaiky vahoaka sy ho an’ny vahoaka ataon’ny eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), araka ny toromariky ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana. Tato anatin’ny volana vitsy no nanombohana ny asa fanamboarana ary efa eo an-dalam-pahavitana avokoa izy ireo . Tetibola madiodio avy amin’ny CUA no namatsiana ny asa fanamboarana rehetra, toy ny fitaovana sy ny karaman’ny mpiasa. Ankoatra ny asa fanamboaran-dalana dia mitohy ny asa fanadiovana faobe ny lakandrano fivarinan’ny rano maloto teny Antetezana Afovoany mirefy 800 m sy teny Ambohimandroso amin’ny alalan’ny asa tanamaro na HIMO. Tsongaina manokana amin’ny fanatanterahana izany ireo sokajin’olona sahirana eny amin’ny fokontany misy ny asa tanterahana. Tonga nijery ifotony ny asa fanamboarana lalana sy lalankely omaly alakamisy 19 septambra, ny sekretera jeneralin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra, Rina Randriamasinoro, nisolotena ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, ny delegen’ny boriborintany voalohany Randriamamonjy Lanto, ny delegen’ny boriborintany faha-2 Naivo Rahamefy ary ny delegen’ny boriborintany faha-6 Fehizoro Andrimananjezika, sy ny mpiara-miasa aminy avy. Faly ireo mponina satria afa-pahasahiranana. Isaorana, hoy izy, ireo ny tompon’andraikitra rehetra nahatontosa izao asa izao. Miezaka hatrany ny CUA, hanala fahasahiranana ny mponina, indrindra amin’ireo fotodrafitrasa manakaiky vahoaka mivantana amin’ny maha Antananarivo soa iombonan’ny Malagasy azy, hoy ny Sekretera jeneraly, Rina Randriamasinoro.